नायक आर्यन सिग्देल बाबु बन्दै हेर्नुहोस् सिग्देलका रोमान्टिक तस्बिरहरु
सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६ १०:५८:४२
चैत ४, काठमाडौंं । चकलेटी अभिनेता आर्यन सिग्देल बैबाहिक जीवनमा बाँधिएको चार वर्षपछि बुवा बन्दैछन् । नयाँ वर्ष २०७६ साल बैशाखमा आर्यन पत्नी सपना भण्डरी सिग्देलले पहिलो सन्तानलाई जन्म दिँदैछिन् । र्भखरै आर्यन पत्नी सपनाले आफ्नो फेसबुकमा ‘बेबी बम्प’ देखाउँदै श्रीमान् आर्यनसँगका रोमान्टिक तश्बिरहरु साझेदार गरेकी छन् । तश्बिरमा दुबै निकै खुसी देखिएका छन् ।
आर्यन पहिलो सन्तानलाई स्वागत गर्न निकै उत्साहित रहेको तश्बिर हेर्दा अनुमान लगाउन सकिन्छ । तश्बिरमा श्रीमती सपनाको ‘बेबी बम्प’ मा चुम्बन गरेकोदेखि बच्चाको कपडा हातमा खेलाउँदै उनी दंग देखिएका छन् । एक तश्बिरमा भने उनको हातमा फिल्मको क्ल्यापमा छ, जसमा लेखिएको छ, ‘रिलिजिङ द न्यू इयर २०७६’ । तश्बिरमा दुईको जोडी कमालको देखिएको छ ।
‘कसैसँग यति धेरै प्रेम गर्न कसरी सम्भव छ र ? मलाई कहिल्यै थाहा थिएन कि एक मोटो पेट यति धेरै सुखद हुन्छ’, सपनाले तश्बिरसँगै क्याप्सनमा अगाडि लेखेकी छन्, ‘२०७१ सालकोे बैशाख मेरो लागि खास थियो, जसले मेरो जिन्दगी बदलियो । अब २०७६ सालको बैशाख अझ खास हुनेछ, जसले हाम्रो जिन्दगी बदलिनेछ ।’
प्रकाशित मिति: सोमवार, चैत्र ४, २०७५, ०४:०३:००
दमाई र दमाहा बाजाको प्रयोग
कर्णालीमा हराउँदै हुड्के नाच
हेलेनको साथी मार्था
म अछुत !
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६ नेपालबोट समाचारदाता
ज्येष्ठ नागरिकको रोजाई बन्दै दिवा सेवा केन्द
आफ्ना अनुभव साँटासाँट गर्ने, नाँचगान गर्ने र विभन्न विषयमा छलफल गर्ने भएपछि शारीरिक रुपमा काम गर्न नसक्ने, घर र आफन्तबाट प्रभावकारी स्याहार नपाएका पीडा भुलाउन उक्त केन्द्र सबै वृद्धवृद्धाको रोजाईको ठाउँ बनेको हो । पुरा पढ्नुहोस्
कर्णालीमा ‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६ 30